Q-7aad taxanihii adeegto
maxamedsheekafguun Seteembar 25, 2020 sheekooyin
Raggii safarka wataye awalba yaabbanaa ayaa sii yaabay una qaadan waayey qaylada meesha ka baxaysa, Nin raggii ka mid ah ayaa inta adkaysan waayey wuxuu isku sii daayey dhankii qayladu ka yeeraysay, isagoo qorigiisii oo xabbadda ka buuxaan wata mid midna hawada u quusinaya. Orod iyo qayluu isku daray isagoo leh “Yur, yur, yur,” nin kalaa isna ka daba tegay si uu gacan u siiyo kan sii ordayey.
Maryan qayladii ma ay joojine meesheedii bay ka miistay. Nimankii oo sidii isu daba ordaya meesha qayladu ka baxaysana higsanaya ayaa ku yimid geedkii Maryan ka dhex qaylinaysey. Labadoodii oo is daba garmamaynaya baa isa soo hoostaagay.
Geedkii Maryan markay aragtay in dad aadami ahi hoos joogaan bay meeshay joogtay iska soo qaadday. Labadii nin ayaa arkay inay soo lulato soona dhacayso, iyagoo u wada jira bay qabta maageen. Saddexdoodiiba dhulkay wada galeen culayskii iyo xawligay Maryan ku socotay daraaddeed.
Maryan baa suuxdin dhag tiri. Labádii ninee qabtay intay yare kaakaceen oo jafjafteen Maryan oo suuxsanna dhan isaga dhigeen bay is kor taageen. iyagoon isla hadlayn bay marna iyagu is eegaan marna Maryan eegaan. Dhiciddday dheceen darteed nabarro sahlan baa gaaray walowba ay mid u badnaayeen.
In cabbaar ah ayaa wixii sharqan, hadal qaylo ama yabaq jirayba dameen. Kuwii awrta hayay ayaa shakiyay oo is yiri “War nimankii ma raxan bay afka u galeen oo horaa loo burbursaday” Mararkay waxba hubi waayeen baa garcaddaagii ragga ku jirey qaylo dhaamiyey. “Waryaaya war idin mee oow, war Cali.
Labadii loo dhawaaqayey ee Maryan kortaagnaa awalna hadalkaba iska la’aa ayaa sidii raadiye awal dansanaaye hadda la daaray hadal bilaabay markay maqleen qayla-dhaamada iyagu u dhacaysa.
Mid, baa inta qorigii hagaagsaday Maryanna ku foorarsaday yiri, “Waar maqal, adna bahalka ina ka eeg diyaarna u dhow anna inantaan qaadaya’. Waxbana maba sii sugine inantii buu laabta u ritey. Siday u sii sideen iyadoo weli suuxsan bay dhex geeyeen raggii kale. Markay dhigeen baa mid kuwii awrta hayey ka mid ahi yiri, “Oo maxaad u soo qaaddeen qofka meydka ah. maad u soo dhaaftaan bahalkii dilooday?’
Kii sidey baa inta yare qosol gaaban qoslay yiri: “war qoftu meyd ma aha, bahalna maba taabane way suuxsan tahay oo keliya, Qoftani geed bay fuushanayd kana dul qaylineysay. Waad iska garanaysaan bay ila tahay libaaxuna iyaduu hoos joogayoo ilaashanayey. Arrini waa sidane hadda maxaynu yeeli?
Markaas oo kale talada waxaa sida badan yare lagu eegaa ninba intuu ninka kale ka waaya-aragsan yahay walowba haddana aad loo tixgeliyo ragannimada iyo tala-asiibka laga yaabo in lagu kala horreeyo. Odaygii is bidayey ayaa arkay in taladu sugeyso, ragga kaloo dhallinyaro wada ahaana uga wada maageen waxa ka dhihidda isagii untuu xagga iyo xagga eegay buu yiri, “war bal bahalka inaga ilaasha ina kama dheeree. Waxaynu yeeleynaa waxay ila tahay qofta da’daa ahee meeshan cidlada ah joogtaa way naqsan tahaye haddii wax biyo ah aynu wadannay u soo fura madaxana u qooya bal inay miyirsato.’ inan ayaa boodey oo qarbad biyo ku jireen soo dhuftay. Naas buu inta furay madaxa kaga shubay. Maryan mar alla markii biyuhu taabteen bay kor u booddey qaylana af labadii yeertay, Aaa, waaw, waaw, alla, alla”
Waa la qaqabtay oo inta la soo fariisiyey la tusay inay dad la joogtee libaax uuna cunayn. Intay indhaha galka ka soo saartay bay hadba dhan eegtaa. Dharkay qabtayoo awalba calallo dhammaada ahaa baa haddana waxaa sii dhammaystiray qarda-jeexii, hirigihii caawa markay ordeysay la horaysay iyo geedkay hadda iska soo tuurtay oo sii luufluufshey.
Sidaa daraaddeed lama oran karo dhar bay qabtaaba. Iyadoo sida u suxud la’ oy hahayaan aad iyo aadna ay u fiigsan tahay ba libaaxiiyoo quustay, maadaama waagii ku caddaaday aadna u xanaaqsan kayn aan sidaa uga fogeyn ka ciyay, Maryan markay maqashay Libaaxa cidiisa bay inta kor u boodday iyadoo qaylinaysa nin horteeda taagnaa saloolatay iskuna duubtay.
Gabayadii Raage Ugaas Warfaa